Isihluzi somoya abavelisi - China Air filter Factory , Suppliers
Isihluzi somoya se-DIY seworkshop kunye nokusetyenziswa kwangaphakathi kulula ukwenza nge-paperboard aif filter
Kubomi bemihla ngemihla okanye iworkshop enothuli oluncinci, kuya kuba kuhle ukuba nesicoci somoya esinokuthi sibambe ngokufanelekileyo uthuli oluphuma emoyeni.Ayizukucoca kuphela umoya, kodwa iya kunceda ukugcina indlu / ivenkile ngokwayo icocekile, ngokubamba uthuli ngaphambi kokuba izinze.
Eyona ndlela ilula yokwenza isicoci somoya esinexabiso eliphantsi kukusebenzisa nje ifeni yebhokisi enexabiso eliphantsi elinesihluzi somoya somlilo esincanyathiselwe ngandlela ithile kwicala lokungena.
Esi sihluzo siyilelwe ukubamba amasuntswana amakhulu emoyeni ahamba emoyeni.Umzekelo, amasuntswana anjengothuli, ilint, iinwele, umungu kunye nespores zokungunda zikhona emoyeni.
gcina icebo lokucoca eliphambili lisebenza ngakumbi ukubambisa amasuntswana amancinci, ayingozi kakhulu kwaye ugcine isihluzo sihlala ixesha elide kwaye iyunithi isebenza ngokutyibilikayo.
Izihluzi zengxowa, okanye izihluzi zepokotho, zisetyenziswa kwizicelo ze-HVAC njengezihluzo eziphezulu zokugqibela kushishino, urhwebo, usetyenziso lwezonyango kunye neziko kunye nezihluzo zangaphambili kufakelo lwe-HEPA.
Isihluzi sangaphambili sisihluzo somoya esisusa amasuntswana amakhulu njengothuli, ubumdaka kunye neenwele.Izihluzi zangaphambili linyathelo lokuqala kwinkqubo yokucoca umoya kwisicoci somoya.Isihluzi sangaphambili sikhusela ezona zihluzo zomoya zingundoqo ekubeni zingavalwa bubutyobo ukuze zibambe izinto ezingcolisa iimicroscopic.